भूकम्पको भ्रम फैलाउने अर्जुनले प्रहरी समक्ष दिए यस्तो बयान, के हुन्छ कारबाही ? « Khabarhub
भूकम्पको भ्रम फैलाउने अर्जुनले प्रहरी समक्ष दिए यस्तो बयान, के हुन्छ कारबाही ?
काठमाडौं– नेपालमा जेठ २९ भित्र महाभूकम्प आउँछ भन्दै भविष्यवाणी गरी अपवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका ‘ज्योतिषी’ अर्जुन कुमार क्षत्रीले अनुमानको भरमा भविष्यवाणी गरेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
जनमानसमा महाभूकम्पको भ्रम फैलाएकोमा प्रहरी हिरासतमा रहेका उनले बयान दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनी ज्योतिष नै नभएको आशंकामा प्रहरीले थप अनुसन्धान पनि अगाडि बढाएको छ ।
महाभूकम्पको भविष्यवाणी गरेर जनतामा भ्रम फलाएको आरोपमा अहिले उनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन् । युट्युवरहरूलाई बोलाएर महाभूकम्पको हल्ला फैलाएको आरोपमा उनलाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले गौशालाबाट पक्राउ गरेको थियो ।
उनीमाथि विपद् जोखिम व्यवस्थापन ऐन २०७४ अन्तर्गत ६ महिना कैद र १ लाख जरिवाना हुनसक्ने बताइएको छ । बयानको क्रममा उनी ज्योतिष नै नभएको आशंका पनि बढेको एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन् । उनलाई ज्योतिष महासंघले पनि कारबाही गरेर निस्कासन गरिसकेको बताएको छ।
प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार ७ : ५४ बजे